Ciidamada Somaliland ee ku sugan deegaanka Kalshaale oo weerar ku qaaday ciidan beeleed ka soo jeeda gobolka Cayn. – Radio Daljir
Ciidamada Somaliland ee ku sugan deegaanka Kalshaale oo weerar ku qaaday ciidan beeleed ka soo jeeda gobolka Cayn.
Buuhoodle, Jan 30 – Waxaa in dhawaale isku hor-fadhiyey deegaanada Kalshaale, Hagoogane iyo Maygaagle ciidamo ka tirsan maamulka Somaliland iyo ciidamo beeleed ka soo jeeda bariga Burco oo isku dhinac ah, iyo ciidan beeleed kasoo jeeda gobolka Cayn; tani waxaa ay la xidhiidhtaa dagaal beeleed 16-kii November, 2010 ka dhacay deegaanka Kalshaale oo ay ku dagaalameen laba beelood oo kasoo kala jeeda gobollada Cayn iyo Togdheer.
Wixii mudadaasi ka danbaysey waxaa halkaasi kusoo qulqulayey ciidamo ka tirsan maamulka Somaliland iyo malayshiyaad kasoo jeeda bariga gobolka Togdheer.
Dagaalkan maanta dhacay ayaa waxaa uu markii hore bilawday subaxnimadii hore ee saaka waxaana deegaanka Kalshaale isku rasaaseeyey laba kor-jooge ama ilaalo oo ka kala socota ciidan beeleedka Buuhoodle iyo kan bariga Burco. Dagaalkaasi ayaan dhalin wax khasaare ah, intaasi kadib ayaa galabta saacadu markii ay ahayd abaaro 3:50 daqiiqo waxaa weerar ku soo qaaday fariisin ciidan beeleedka Buuhoodle ay leeyihiin ciidamo ku hubaysan gaadiidka dagaalka oo hoostaga maamulka Somaliland.
Dagaalkani oo socdey mudo saacada ah, gabalkuna uu u dhacay, ayaa waxaa la sheegayaa inuu dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac ah.
Inkasta oo ay adag tahay in si rasmi ah loo ogaado khasaaraha dagaalku dhaliyey, maadaama weli dhinacyadii dagaalamay ay iska aag dhow yihiin, hadana waxaa la tilmaamayaa inuu khasaare badani jiro.
Jawiga magaalada Buuhoodle ayaa ah mid aad kacsan, gebi ahaanba waxaa xiran goobaha ganacsiga, sida makhaayadaha laga cunteeyo, meelaha laga sharaabo, iyo goobaha kale ee la isugu tago, dariiqyada magaalada Buuhoodle ayaa waxaa tuban dadweyne aad u tira badan kuwaasi oo u badan haween iyo caruur; waxaana soconaya gaaadiid ka noocyadiisa kala duwan, ayna saaran yihiin ciidan beeleed kasoo jeeda gobolka Cayn, kuna sii jeeda deegaanka dagaalku ka dhacay.
Dhakhtarka magaalada Buuhoodle ayaa waxaa la soo gaarsiiyey hal qof oo dhaawac ah waxaana la sheegayaa in ay hada kusoo wajahan yihiin tira kale oo dagaalka kusoo dhaawacmay; dhimasho ayaa la tilmaamayaa in ay jirto labada dhinac walow aan la xaqiijin karin tirada labada dhinac ka dhimatay.
Iskusoo wada duuboo, dadweynaha magaalada Buuhoodle iyo Guud ahaanba gobolka Cayn ayaa caawa ah kuwo colaad ku soo hoy’dey, waxaana saacadaha soo socda la filayaa inuu dhaco dagaal ka khasaare badan midka galabta dhacay, mana muuqato saansaan dagaal ku baaqdo oo ka socda labada dhinac. Ciidamo beeleedka gobolka Cayn ayaan iyagu wax garab ah ama taageero ah ilaa hada aan ka helin wax maamul ah, halka ciiidan beeleedka bariga Buco ay garabsanayaan maamulka ay hoostagaan ee Somaliland.
Ciidamda Somaliland ee ku sugan Kalshaale, Hagoogane iyo Maygaagle ayaa dhulkaasi markii hore kusoo galay qaab u eg dhexdhexaadnimo, balse sida muuqata la saftay ciidamo beeleedka bariga Burco, weerarna ku soo qaadeen ciidan beeleed ka soo jeeda gobolka Cayn oo fariisin ku lahaa deegaanka Hagoogane oo ku dhow deegaanka Kalshaale.
Idaacadda Daljir, Buuhoodle.